Salma Hayek: Biography, Filmography futhi ukuphila siqu (izithombe)
Kuze kube manje, Salma Hayek kubhekwa omunye abadlali ethandwa kakhulu futhi siphumelele Hollywood. abalandeli bakhe ukuthi njengoba actress omkhulu, umkhiqizi onekhono, umama onakekelayo futhi enothando ezaziwayo. USalima ingenye abadlali abambalwa Mexican ukuba ziye abaphakanyiselwe "Oscar". Kodwa indlela eya empumelelweni yini amantombazane kusuka eMexico bewungelula.
Salma Hayek: A Biography kanye ebuntwaneni
Inkanyezi esizayo wazalwa ngo-September 2, 1966 edolobheni elincane Coatzacoalcos, okuyinto insimu ka isimo Mexican of Veracruz. Unina Diana Jimena Medina - opera umculi nge izimpande Spanish. Ubaba Sami Dominguez wasebenza njengomphathi we-inkampani kawoyela. abazali uSalima sika wawungamaKatolika ashisekayo futhi intombazane yena wakhulela endaweni enhle - ubumpofu umndeni akazange ahlupheke.
Esemusha, kwatholakala ukuthi unesifo - dyslexia. Nakuba intombazane anekhono, ngokuvamile nobunzima enqubeni yokufunda. Lapho eseneminyaka engu-12 ubudala, abazali bakhe wathumela uSalima lokuyofunda lamaKatolika ngayohlala khona esikoleni for girls, esemgwaqweni Louisiana. Kodwa ngenxa yezinkinga ukuziphatha uSalima wayeka isikole iminyaka eminingi wakipita anti wakhe e-Houston. Ngezinye 17, wabhalisela ku Ibero-American Institute eMexico City, lapho eqala ukufunda kwamaZwe. Kodwa imfundo akakaze kwadingeka.
Njengomdlali waseshashalazini uSalima?
Ngesikhathi ngisafunda at sikhungo ukuthi ngokuqinile uzimisele ngokuba actress abadumile. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, wasebenza yeshashalazi ahlukahlukene. Kancane kancane, ezikhangayo, intombazane abahlakaniphe waqala ukuqaphela - yavela khona okokuqala commercial ithelevishini, ngemva kwalokho wathenjiswa indima encane uchungechunge sethelevishini.
Futhi ngo-1989, yena luvele esibukweni ku telenovela ethandwa onesihloko esithi "UTeresa". Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke iba usaziwayo ku "eMexico". Bese kulandele ngowokuqala yobude obugcwele ifilimu, okuyinto inkanyezi Salma Hayek. actress Filmography iqala nge "Alley of Izimangaliso" ezavela ezikrinini ngo-1994. Esiqintini ifilimu isitshela indaba emangalisayo yokuphila likaPondo elincane eMexico City. Lapha uSalima kudlalwa Alma - intombazane elingenacala, waphupha of uthando olukhulu futhi emsulwa. By the way, lesi sithombe lithole inombolo irekhodi wokubuyekezwa okuvumelekile, uSalima yena uqokelwe Elithi "Ariyeli" umklomelo.
Imisebenzi kuqala Hollywood
Ngo-1991, umdlali wathutha e-Los Angeles nge isimo abakwamanye amazwe okungekho emthethweni. Ngokwemvelo, ngenxa dyslexia yena nobunzima nokubi iqhutshwa ngesiNgisi. Noma kunjalo, waya Stella Adler, owanikela izifundo zakhe yolimi isisizile ukubhekana nezinkinga dramatics.
Nakuba zonke ukukholisa Man ukuthi ngeke bakwazi impumelelo Hollywood. Besabela kuleso simemo, uSalima wasebenza nzima. Izikhathi eziningana, yena okunenkanyezi izimakethe, kanye ngezikhathi ezithile wathola kancane izingxenye kwimidlalo ye-TV. Wabuye nengxenye kokuqoshwa lweSpanishi inkulumo show, lapho uyayibona umqondisi abasha Robert Rodriguez. Nguye bammemela audition.
Ngo-1995, actress Salma Hayek uqala ukuvela ezikrinini American e ifilimu "Desperado." Co-inkanyezi Le filimu Antonio Banderas, eyazuza njengefa indima El Mariachi. Le filimu idume ngokuthi uSalima futhi Banderas. Ngemva kwesizini, actress Baqala ukwamukela izimemo ukuze ubambe iqhaza kumaphrojekthi eyingozi.
Salma Hayek: Filmography
Manje actress usuthandwa. Eqinisweni, ngemva impumelelo "Desperado" bonke babazi ukuthi le Salma Hayek. Amafilimu nge iqhaza wakhe wabukela a lot of abalandeli. Ngo-1995, wathola indima uRita ngo senzo movie "Fair Game", lapho yena babambisane inkanyezi nge UWilliam Baldwin futhi USindi Krouford.
Futhi ngo-1996, ezikrinini out Umdwebo yisakhiwo sodumo "Kusukela Ukuhlwa Till Dawn", lapho uSalima wadlala indima encane Santaniko Queen - umdanso yakhe edumile ngokukhuluma inyoka wakhumbula okwesikhathi eside isikhathi ababukeli. Wayithola indima isihloko kule comedy romantic "washesha kwenza imfucuza." Elizabeth Fuentes ekusebenzeni kwakhe waba mkhulu.
Ngo-1997, uSalima, kanye Russell Crowe izinkanyezi ku-movie "On the esengozini engenangqondo." Ngo "I onesifumbu of Notre Dame" actress got indima le lwamaGypsy Esmeralda. Ngo-1999, wadlala Rita Escobar ku yaseNtshonalanga "Wild Wild West." Umlingisikazi Rosario Baphinde badlala ifilimu "Traffic" USteven Soderbergh, eyabonakala ezikrinini ngo-2000.
Ngo-2003 kwafika phambili ifilimu "Desperado" esinesihloko esithi "Uma eMexico" - lapha uSalima inkanyezi eceleni Antonio Banderas. Futhi ngo-2006, umdlali uye wasebenza umngane wakhe omkhulu Penelopoy Krus ku Westerns Luc Besson sika "Bandidas." Futhi ngenkathi baxgeki lokhu ifilimu ziye elixutshwe, uthule Hayek Cruz yanqoba izethameli emhlabeni wonke.
Futhi ngo-2006, kudlalwé ifilimu "Lonely Izinhliziyo", lapho umdlali kudlalwa lolungenamaphutsa aphambe uMarta.
Ngokwemvelo, amafilimu iqhaza actress abadumile Mexican okuningi. Phakathi nenkonzo yakhe yokuba, uSalima umsebenzele ku engaphezu kwekhulu imidwebo izinhlobo ezahlukene. Futhi kude isethi ngeke - kusekhona eziningi umsebenzi Mexican abanamakhono.
Salma Hayek eside ngiphupha ukuzama isandla sakhe kukhiqizwe. Futhi ngo-2000 wavula inkampani yakhe siqu ukukhiqizwa futhi waqala ukusebenza phezu kwendalo amabhayisikobho. Futhi experiment yayo kuqala kwakungumprofethi idrama "kusho uColonel akekho ubhala," okuyinto isitshela indaba i sobudala nomkayo egulayo, ubumpofu, elinde impesheni wathembisa uhulumeni iminyaka eminingi. Le filimu lokuqala kwaba actress yimpumelelo futhi wathola eziningi okubuyayo.
"Frida" kwakukhona isithombe edume ngo-2002. Ngemva konyaka, uSalima wadala ifilimu "Isimangaliso Maldonado," ngoba yena wathola umklomelo "Emmy." Ngo-2005, inkampani yakhe futhi clip ukuze oculayo Prince udaliwe. Futhi ngo-2006, uSalima uhlaziyo ukudalwa ochungechungeni "Shwi Ugly", protagonist zawo ezinkulu i-nabanomusa, kodwa kakhulu intombazane Homely. By endleleni, lokhu owuchungechunge ngokushesha waba omunye ethandwa kakhulu e-United States futhi yathatha ezine zonyaka - uchungechunge lokugcina yathathwa ngo-2010.
Amafilimu amasha nge actress abadumile
Kunezinhlobo ezingaphezu izithombe ezintsha, Starring Salma Hayek. Filmography lakhulisiwe yayo ngo-2009, "The Vampire", lapho wadlala owesifazane darnel Mma Truskov. Ngo-2010, ngaphandle ahlekisayo "Odnoklassniki", lapho umdlali got indima Roxanne Ches-Feder. By endleleni, ngo-2013 kwavela ukuqhubeka - "Ofunda nabo-2", lapho uSalima futhi iqhaza.
Ngo-2012 kwafika ama-movie amasha ne Salma Hayek. Uhlu imisebenzi yakhe ahlanganiswe imidwebo, "kuyingozi ngokukhethekile", lapho wadlala uHelen, kanye comedy "Nansi Boom," lapho ivuka indima Bella.
I edume "Frida" futhi impumelelo runaway
Uma unesithakazelo amabhayisikobho best nge Salma Hayek, kuyafaneleka ukunaka ifilimu oluchaza "Frida." Lapha umdlali uye nje kuphela nendima enkulu, kodwa wabuye wabakhumbuza co-umkhiqizi. Ngisho nalapho ngiseyingane ezwa le ndaba ethinta inhliziyo ebuhlungu umdwebi odumile Mexican Frida Kahlo, uSalima iphupho ezithandwayo zezingoma kanye ukuwudlala enkundleni.
Futhi ngo-2002, amathuba yena ayebonakele. Lo mlingisi ngokuphindiwe waveza ukuthi indima Frida wanikwa kanzima kwakhe. Phakathi ukuqopha, washonelwa isisindo 6 kg kanye nezinkinga obungapheli ubuthongo, njengoba ezama ukuba adabule yobuhlungu umdwebi odumile.
Lo msebenzi uSalima ngendlela ebonisa ngempela. Lo mlingisi hhayi kuphela ngakwenzile indima, kodwa futhi wathonyelwa abanye "nozakwethu inkanyezi" ukudlala kule filimu. Le filimu wathola okuningi wokubuyekezwa okuvumelekile kanye nemiklomelo, kuhlanganise imiklomelo emibili "Oscar" (elisho "engcono ilungiselelo zomculo" futhi "Kuhle Makeup") futhi "Globes Golden". By the way, indima Frida esithile sake sagomela Madonna, ngubani fan okhuthele ithalenta umculi.
Edward Norton - indoda yokuqala Salma Hayek. Ama ambalwa sashada ngo-1999. Futhi nakuba ekuqaleni lokhu wabheka umshado ojabulisayo, izinto zashintsha ngokushesha - kweminyaka emine, actress wafaka isicelo sesehlukaniso. Ngo izingxoxo, wayevame ukusho ukuthi kwakudingeka bahlale bezwa ukugxekwa evela kumuntu omthandayo. Akakuthandanga wakhe ukuzimela, ukuzethemba, ukugxila, imibono yezombangazwe, bathande isiko Mexican ngisho isitayela yokugqoka.
Ngo-2003, umdlali waqala ukuphola umlingisi Josh Lucas. Lezi ubudlelwano ayihlali isikhathi eside - umbhangqwana waphula ngo-2004. kamuva uSalima wahlangana François-Anri Pino, ngubani, ngenhlanhla ingenye abayikhulu abacebe kunabo bonke emhlabeni. Ubudlelwano phakathi kwazo beyimabhombo, babeyaphi ukushada, futhi ngo-2007, uSalima wazala indodakazi uValentina. Kodwa ngo-2008 umbhangqwana inkanyezi yamemezela ngokuhlukana. Noma kunjalo, ngemva kwesikhashana uFrancois uSalima ukubuyisana - ngo-2009 bashada i yaseshashalazini ubudala e-Venice.
Imiklomelo kanye iziphakamiso Salma Hayek
Yiqiniso, phakathi nenkonzo yakhe, actress wathola eziningi iziphakamiso futhi imiklomelo ehlonishwayo. Njengoba sekushiwo, kuba Mexico e-Hollywood umlando wokuqala, okuyinto waqokelwa "Oscar" ngoba "Umlingisikazi Kuhle". Useke wathola imiklomelo njengendlela producer, ngokukhethekile, ifilimu yakhe yokuqala waqokelwa "Palme d'Noma".
By the way, actress livela njalo nesembozo omagazini ecwebezelayo futhi namuhla likhona rankings of abesifazane amahle kakhulu futhi oyifunayo emhlabeni. Futhi hhayi ngakho kudala yena waklonyeliswa Order of Chevalier ka iButho Ukuhlonishwa eFrance ngabonga inkongozelo akhe asebenzayo.
A amaqiniso ambalwa ezithakazelisayo mayelana actress
Ngaphezu leso sinyathelo futhi umkhiqizi umsebenzi, Salma Hayek futhi kaningi benza njengokungathi umqondisi. UBooysen wakwazi ukusho ukuthi ukurekhoda izingoma ezimbalwa ne abadlali owaziwa - ezimweni eziningi kuba soundtrack for movie. Ngokwesibonelo, actress ukwenze okuqoshiwe amaningana asho "Frida" futhi "Uma eMexico."
Yena nawo uhilelekile kule umsebenzi wokusiza abantu futhi ngenkuthalo belwela amalungelo abesifazane emhlabeni wonke, abathintekayo kule nhlangano "Abesifazane Against Udlame". USalima uthola umngane wakhe omkhulu kungekho actress kancane odumile Penelope Cruz. Naphezu dyslexia, manje actress ezidumile kuyinto kahle isiNgisi, isi-Arabhu, isi-Spanish kanye isiPutukezi. Futhi akakaze amawashi movie ne iqhaza zabo.
Eqinisweni, actress eyaziwa ngokuziphatha wakhe ongaphezu kovamile, futhi Antics ngezinye izikhathi okweqisayo. Nge ukukhuphuka elincane ezingu-157 cm isisindo saso singamakhilogremu mayelana 52 amakhilogramu. Lo mlingisi uyaziqhenya sibalo sakhe, kanye ubuhle isikhumba. Lapho kuxoxwa, uSalima ukuthi ukuze alondoloze Ukuvumelana ... ukudla izinambuzane. Ngokuqinisekile usaziwayo besingalindele ukuthi kuzothatha kakhulu la mazwi, futhi adla ewubuciko iba okukhulunywa ngawo kakhulu ku-intanethi.
Ngakolunye uhlangothi, actress uyawuthanda ngezindaba ezithile izimfihlo yobuhle bakhe. Ikakhulu, enamathela ezimisweni kwamandla wamaqhuzu futhi, ngokungafani abanye bengisebenza nabo akuzona kakhulu ivamile zokuzivocavoca. Njengoba for isikhumba ukunakekelwa, lisebenzisa amathiphu ukuthi wanika ugogo wakhe - njalo uhlanza futhi moisturizes isikhumba. By the way, naphezu kweqiniso lokuthi ukwakheka Salma Hayek is bayahlonishwa abalandeli bakhe, izimangalo actress osebenzisa izimonyo zokuhlobisa kuphela uma kunesidingo, njengoba isikhumba udinga ukuphumula kusukela "imibala".
Ibhayisikobho "Izincwadi ku ingilazi." Uzungu yochungechunge "Izincwadi ku ingilazi"
Umqondo "movie ethandwa kakhulu" - kwencazelo non-unomphela
Incazelo ifilimu "Xwayani Car." Abalingisi kanye izindima
Yuri Medvedev ekuyi: Umlingisi Filmography
Le filimu "Buyisela Ticket": nabalingisi ukukhombisa umbukeli nesimo esinzima futhi indlela yokuphuma ke
Abalingisi abamukele "Oscar": uhlu ngezithombe
Ukuphepha umphini - isihluthulelo ukusebenza okuphephile heater amanzi
Kunezinhlanzi eziwusizo kubantu
Yiphi indima indandatho uhambo ukudoba
Iqiniso ezithakazelisayo kakhulu mayelana ne-chemistry. i-chemistry Okuhlobene: Managing
Osomabhizinisi Famous yembula izimfihlo impilo kanye nolusha
"Ijeli Sanoks": incazelo, ukwakheka, izakhiwo
Kungani imisipha obukhulu emva Amazing?
CSR 2: izilungiselelo Umshini umdlalo
Ahambe kwamadolo: Photo obuphelele. Kusukela sizogqokani isiketi kwamadolo?
Wireless igundane Logitech M185: izici kanye nokubuyekeza
Amakhekhe eKharkov - omuhle wobuciko etafuleni lakho